Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-1 kufutshane - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-1 kufutshane
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSamir
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala atofotofo ekwindawo entle eCandolim (imizuzu eyi-5 xa usiya elunxwemeni). Ikhaya elifanelekileyo leholide lentsapho okanye abahlobo beendwendwe eziya kutsho kweziyi-4 ezifuna ukuchitha iholide yazo kufutshane namalwandle, iindawo zokonwaba ebusuku kunye nazo zonke iindawo eziphambili eNorth Goa. Iivenkile zokutyela, imarike yasekuhlaleni, iivenkile zokutya njl zikumgama okuhanjwa ngeenyawo.
Iindwendwe zesithathu neziyi-4 ziza kulala kwindawo yokuhlala kwisofa cum bed kunye nomatrasi owongezelelekileyo. Nceda uqaphele ukuba iflethi okanye indlu ekwicomplex ikumgangatho wokuqala kukho amanyathelo
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala atofotofo ekwindawo entle eCandolim (imizuzu eyi-5 xa usiya elunxwemeni). Ikhaya elifanelekileyo leholide yezibini, intsapho okanye abahlobo beendwendwe eziya kutsho kweziyi-4 ezifuna ukuchitha iholide yazo kufutshane namalwandle, iindawo zokonwaba ebusuku kunye nazo zonke iindawo eziphambili eNorth Goa. Iivenkile zokutyela, imarike yasekuhlaleni, iivenkile zokutya njl zikumgama okuhanjwa ngeenyawo.
Iindwendwe zesithathu neziyi-4 ziza kulala kwindawo yokuhlala kwisofa cum bed kunye nomatrasi owongezelelekileyo.
Iflethi ikwindlela ephambili ye-candolim kwaye ikumgangatho wokuqala wesakhiwo. Inegumbi lokulala elitofotofo elinendlu yangasese nendawo yokuhlala evulekileyo enesofa eyibhedi netafile yokutyela yeentsuku eziyi-4. Igumbi lokulala nelokuhlala linomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu.
Ukucoca kuza kwenziwa phakathi ko-11 kusasa no-2 emva kwemini.
Izinto zebhedi ziza kutshintshwa kube kanye kwiintsuku eziyi-3.
Sisekwindawo ephambili eCandolim (malunga nemizuzu eyi-5 xa usiya elunxwemeni)
Iivenkile zokutya, imarike yasekuhlaleni, iivenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo, ii-Atms, iivenkile zonyango njl zikumgama onokuhanjwa ngeenyawo.
Ezinye iilwandle ezifana neBaga, iCalangute, iVagator kunye neAnjuna ziphakathi kwe-2-4kms.
Umbuki zindwendwe ngu- Samir
Hi, I am Samir, born and brought in Goa...this is what i missed these years and love being a host and I am enjoying it the most besides my other work profiles.
We welcome you to stay with us and experience the true Goan spirit of hospitality and make your stay a unique memorable experience.
We welcome yo…
Mna nombuki zindwendwe ondincedisayo uPoonam siza kuqhagamshelana nawe ebudeni bokuhlala kwakho.